Ihe kachasị iwebata maka Megestrol acetate ntụ ntụ | AASraw
/blog/Megestrol acetate/Ihe kachasị iwebata maka Megestrol acetate ntụ ntụ
Ihe na 07 / 01 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na Megestrol acetate. O nwere 0 Comment.
Ihe niile banyere Megestrol acetate ntụ ntụ
Nyocha 1.Megestrol acetate (CAS: 595-33-5)
2.How ka Megestrol acetate ọrụ?
3.How bu methrol acetate uzo kachasi nma?
4.Wịnị ka ị ga-eme tupu ị na-ewere megestrol acetate ntụ ntụ?
5. Kedu ka m ga-esi jiri ihe mgbochi mextrol acetate?
6.Use Megestrol Acetate Powder na ụfọdụ ndị mmadụ
7. Kedu ihe m kwesịrị ịma banyere nchekwa na mkpofu ọgwụ a?
8.Megestrol acetate mmetụta utịp
9.Megestrol Acetate Jiri Ebube Kwesịrị Iji Eleda Anya
10.Wa bụ ozi kachasị mkpa m kwesịrị ịma gbasara Megestrol Acetate ntụ ntụ?
11.Olee m nwere ike ịnweta ozi ndị ọzọ banyere Megestrol Acetate?
Megestrol acetate ntụ ntụ video
I.Megestrol acetate ntụ ntụ isi agwa:
aha: Megestrol acetate ntụ ntụ
Ụdị Mkpụrụkpụ: C19H26O3
Ọbara arọ: 302.41
1. Megestrol acetatenyocha (CAS:595-33-5)
Megestrol acetate ntụ ntụ bụ ụdị ọgwụgwọ hormone. A na-akpọkwa ya Megace ma ọ bụ megestrol (595-33-5). Ọ bụ nwoke na-emepụta mbipụta nke hormone progesterone. Progesterone bụ otu n'ime hormonụ nwanyi kama ndị mmadụ na-emepụta obere ego ya.
Megestrol acetate ntụ ntụ bụ ọgwụgwọ maka ọrịa ndị na-esonụ nke laghachiri ma ọ bụ gbasaa site na ebe ha malitere.
♦ ọrịa kansa
♦ akpa nwa
Ọ bụkwa ọgwụgwọ maka agụụ siri ike. Dika dọkịta gị nwere ike ịgwa gị ka ị were ya ma ọ bụrụ na ị furu efu n'ihi cancer ma ọ bụ ọgwụgwọ ya. Ndị dọkịta nwekwara ike iji ya dịka ọgwụgwọ maka ndị inyom nwere ụfụ ọkụ n'ihi ọrịa cancer ha ma ọ bụ ọgwụgwọ ya.
2. Olee otú Megestrol acetateọrụ?
Megestrol acetate bụ ụdị ọgwụgwọ hormone. Hormones bụ ihe ndị dị na mmiri na-emepụta site na glands n'ime ahụ, nke na-abanye n'ọbara ma mee ka mmetụta dị n'ahụ ndị ọzọ. (Dịka ọmụmaatụ, hormone testosterone mere na testicles bụ maka ọrụ nwoke dịka olu dịkwuo na ntutu isi). N'iji ọgwụgwọ hormone agwọ ọrịa kansa dabeere na nchọpụta na ndị nabatara maka homonụ a kapịrị ọnụ bụ ndị dị mkpa maka uto mkpụrụ ndụ dị n'elu ụfọdụ mkpụrụ ndụ tumo. Usoro ọgwụgwọ na-arụ ọrụ site na; ịkwụsị mmepụta nke ụfọdụ hormone, igbochi ndị nabatara hormone, ma ọ bụ dochie ndị ọrụ yiri nke ahụ maka hormone na-arụ ọrụ, nke na-enweghị ike iji ya na cell tumor. A na-ahazi ụdị ọgwụgwọ dị iche iche site na ọrụ ha na / ma ọ bụ ụdị hormone a na-arụ.
Megestrol acetate bụ progestin (ụdị mmadụ hormone progesterone). Ọ nwere ihe ndị na-egbochi usoro iku ume nke estrogen. Nke a na - emetụta ihe mkpali nke mkpụrụ ndụ na etolite na estrogen na - adabere na mkpụrụ ndụ ụbụrụ. A na-echekwa na enwere mmetụta dị irè na mgbidi nke eriri uterine (endometrium).
Mmetụta dị n'akụkụ Megestrol acetate abụwo uru dị arọ. Uzo a na - achikota nke oma, ot'odi, ihe ndi ahu na - ebute abawanye na aru. N'iji uru nke a mee ihe, Megentrol acetate a mụọ ma jiri ya na-agwọ ọrịa mgbu siri ike (anorexia), nsị mgbu (cachexia) na ọnụọgụ nke metụtara ọrịa kansa na AIDS.
3. Kedu ka e si eme ka meverrol acetate ntụcha kacha mma?
Jiri ọgwụ a (Megestrol acetate ntụ ntụ) dịka onye dọkịta nyere gị iwu. Gụọ ozi niile enyere gị. Soro ntuziaka niile anya.
♦ Iji nweta uru kachasị mma, echefula azụ.
♦ Nọgide na-ewere ọgwụ a (Megestrol acetate powder) dị ka dọkịta gị ma ọ bụ ndị ọrụ nlekọta ahụ ike ọzọ gwara gị, ọ bụrụgodị na ọ dị gị mma.
♦ Nwee ihe ezighi ezi ozugbo i chere banyere ya.
♦ Ọ bụrụ na ọ dị nso oge maka ụlọnga ọzọ gị, mechie dose ahụ ezughị okè ma laghachi azụ n'oge gị.
♦ Ejulala doso 2 n'otu oge ahụ ma ọ bụ ihe mgbochi ọzọ.
4. Kedu ihe ị ga-eme tupu ị na-ewere megestrol acetate ntụ ntụ?
♦ gwa dọkịta gị na onye na-ahụ maka ọgwụ ike ma ọ bụrụ na ị na-arịa ọrịa mredrol acetate ntụpọ, ọgwụ ọ bụla ọzọ, ma ọ bụ ihe ọ bụla n'ime ihe ndị na-adịghị arụ ọrụ na megestrol acetate powder, nkwusioru, ma ọ bụ ndọpụ anya. Jụọ dọkịta gị ma ọ bụ onye na-ahụ maka ọgwụ maka ndepụta nke ihe ndị na-adịghị arụ ọrụ.
♦ gwa dọkịta gị na onye na-elekọta ọgwụ na ọgwụ ndị ọgwụ na ọgwụ ndị na-edeghị aha, vitamin, ihe mgbakwunye na nri, na ọgwụ ndị ị na-eburu ma ọ bụ na-eme atụmatụ ime. Jide n'aka na ị na-akpọ ọgwụ nje na indinavir (Crixivan). Dọkịta gị nwere ike ịdị mkpa ka ị gbanwee usoro ọgwụ gị ma ọ bụ nyochaa gị nke ọma maka mmetụta ndị dị na ya.
♦ gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị nwere ma ọ bụ mgbe ọ bụla nwere ọnya ọbara n'anwụ ọ bụla n'ime ahụ, ọrịa strok, ọrịa shuga, ma ọ bụ akụrụ ma ọ bụ ọrịa imeju.
♦ gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị dị ime, na-ezube ịtụrụ ime, ma ọ bụ na-azụ ara. Ọ bụrụ na ị dị ime mgbe ị na-ebu mredrol acetate ntụ ntụ, kpọọ dọkịta gị ozugbo. megestrol acetate ntụ ntụ nwere ike imerụ nwa ebu n'afọ. Emela nri ara ka ị na-ewere ihe meterol acetate ntụ ntụ.
♦ I kwesiri imata na meredrol acetate uzuzu nwere ike ime ka o ghara ime ka ndi nwanyi. Otú ọ dị, ị gaghị eche na i nweghị ike ime ime. Jiri usoro a ga-ejide n'aka nke ịmụ nwa iji gbochie ime ime.
♦ ma ọ bụrụ na ị na-awa ahụ, gụnyere ịwa ahụ, n'oge maọbụ n'oge na-adịghị anya mgbe ị gwọchara gị, gwa dọkịta maọbụ dọkịta na ị bụ ewere minegestrol acetateuzuzu.
Mee kpọmkwem dị ka dọkịta gị si chọọ. Ejila buru ibu ma ọ bụ obere ma ọ bụ karịa ogologo oge. Soro ntuziaka na akara aha gị.
Kpoo nkwụsịtụ ọnụ mmiri (mmiri mmiri) nke ọma tupu ị tụọ otu dose. Nyochaa mmiri mmiri ahụ na-eji ụtụtụ pụrụ iche ma ọ bụ iko ọgwụ, ọ bụghị na tebụl okpokoro mgbe niile. Ọ bụrụ na ịnweghị ngwaọrụ ị ga-eji na-atụ aro, jụọ onye na-ere ọgwụ maka otu.
Megace ES nwere elu dị elu nke megestrol acetate ntụ ntụ karịa Megace. Ọ bụrụ na dọkịta gị agbanwe agbanwe gị, ike, ma ọ bụ ụdị nke meverrol acetate ntụ ntụ, mkpa gị nwere ike ịgbanwe. Jụọ onye na-ere ọgwụ gị ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ọgwụ ị na-enweta na ụlọ ọgwụ.
Ọdịdị ụbụrụ gị nwere ike ịgbanwe ma ọ bụrụ na ịwa ahụ, na-arịa ọrịa, na-enwe nchekasị, ma ọ bụ nwee ọrịa. Adịghị agbanwe ọgwụgwọ ọgwụ gị maọbụ oge ị na-enweghị ndụmọdụ dọkịta gị. Echekwala na ụlọ okpomọkụ na mmiri na okpomọkụ.
6. Jiri Megestrol acetateNzuzu na ndị mmadụ kpọmkwem
Nneaka nke X [lee Warnings and Precautions (5.2)]. Enweghị ihe ọmụma anụ ọkụkụ zuru oke dịnụ dị na doses. Nne ime na-arịa ọrịa dị na Megestrol acetate ntụ (0.02-n'ogige ọgwụgwọ a na-atụ aro ya) mere ka enwelata mgbatị nwa ebu n'afọ na ọnụ ọgụgụ nke ịmụ nwa, na ịlụ ụmụ nwoke na nwa ebu n'afọ.
♣ Nne Nne
N'ihi enwere ike imebi nwa amụrụ ọhụrụ, ọ ga-akwụsị ịzụ nwa ma ọ bụrụ na achọrọ Megestrol acetate ntụ ntụ.
♣ Ọrịa Ụmụaka
Enweghi ike idozi nchebe na irè na ndị na-arịa ọrịa pediatric.
♣ Jiri Geriatric
Nnyocha ọmụmụ gbasara ọrịa Megestrol acetate na ọgwụgwọ ọrịa, cachexia, ma ọ bụ ọnwụ na-enweghị atụ nke ndị ọrịa nwere ọrịa AIDS gụnyereghị ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrịa 65 dị afọ ma ọ bụ okenye iji chọpụta ma ha na-emeghachi omume n'ụzọ dị iche karịa ndị na-eto eto. Ahụmahụ ndị ọzọ gbasara ahụike akọwabeghịrịrị ọdịiche dị n'etiti nzaghachi n'etiti ndị agadi na ndị na-eto eto. N'ikpeazụ, nhọrọ nhazi nke onye ọrịa meworo agadi kwesiri ịkpachara anya, na-amalitekarị na njedebe dị ala nke usoro dosing, na-egosipụta oge dị ukwuu nke ọrịa hepatic, mgbatị, ma ọ bụ obi mgbaka, na ọrịa concomitant ma ọ bụ ọgwụ ọgwụ ndị ọzọ.
A maara mgbochi acetate ntụ ntụ nke ọma site na akụrụ, na ihe ize ndụ nke ọgwụ ndị na-egbu egbu na ọgwụ a nwere ike ịba ụba na ndị ọrịa nwere nkwarụ ọrụ. Ebe ọ bụ na ndị agadi nwere ike ịbawanye ọrụ, nlekọta ga-ewere ya na ntinye nhọrọ, ma ọ nwere ike ịba uru iji nyochaa nnukwu ọrụ.
♣ Jiri nwanyi
Megestrol acetate ntụ ntụ nwere obere ojiji ndị inyom bu nje HIV. Ụmụ nwanyị 10 niile nọ na-agwọ ọrịa na-egosi ọbara ọgbụgba. Megestrol acetate ntụ ntụ bụ ihe mgbapụta progesterone, nke nwere ike ibute ọbara ọgbụgba na ụmụ nwanyị.
A ghaghị itinye ọgwụ ndị a na-atụghị anya ya n'ụzọ pụrụ iche iji hụ na anụ ụlọ, ụmụaka, na ndị ọzọ agaghị eri ha. Otú ọ dị, ịkwesighi ịgbanye ọgwụ a n'ụlọ mposi. Kama nke ahụ, ụzọ kasị mma ị ga-esi jiri ọgwụ gị mee ihe bụ site na usoro mmeghachi omume ọgwụ. Gwa onye na-ere ọgwụ ma ọ bụ kpọtụrụ mpaghara gọọmenti / mkpofu mpaghara gị iji mụta banyere mmeghachi omume na mpaghara gị. chọta www.aasraw.com maka ozi ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ịnweghị ohere ịme ihe omume.
8. Megetrol acetatemmetụta ndị ọzọ
Megace (megestrol acetate, USP) Nkwupụta ụlọnga bụ ọgwụ e ji eme mmadụ nke yiri ọgwụ nke hormone nke nwanyi na-eji agwọ ọrịa na ụkọ ọnwụ n'ihi ọrịa, a na-ejikwa ya na ọgwụgwọ ọrịa kansa na ọrịa cancer endometrial. Megace dị na ụdị mkpụrụ ndụ. Ihe ndị na-emetụtakarị Megace gụnyere:
• afo iwe
• afọ ọsịsa
Nsogbu na-ehi ụra (ụra nke ụra nke ọma)
· Adịghị ike
· Ikelata ikike mmekọahụ / ọchịchọ
• nsogbu nwere orgasm
Ụmụ nwanyị nwere ike inwe mgbanwe na oge ịhụ nwa oge, gụnyere ọbara ọgbụgba na-enweghị atụ Megace Oral nkwusioru bụ 800 mg / ụbọchị (20 mL / ụbọchị). Megace nwere ike iji insulin ma ọ bụ diabetes na-agwọ ọrịa, ọ pụkwara ibelata mmetụta nke ọgwụ ndị a, ọbara shuga ga-arị elu. Ọ bụrụ na ị nwere ọrịa shuga, nyochaa ọbara shuga ma gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị hụ mgbanwe ndị ọzọ. Megace nwere ike iji indinavir, ma ọ bụ insulin ma ọ bụ ọgwụ gwọọ ọrịa ọnụ. Gwa dọkịta gị niile ọgwụ na mgbakwunye ị na-eji. E kwesịghị iji megace mee ihe n'oge ime. O nwere ike imebi nwa ebu n'afọ. Ndị inyom nke na-amụ nwa ga-eji akara ọmụmụ mgbe ha na-eji ọgwụ a. Nri a nwere ike ịba n'ime mmiri ara ehi ma nwee ike inwe mmetụta na-adịghị mma na nwa ọhụrụ. A naghị akwado nri ara ara na iji ọgwụ a eme ihe.
Ụlọ Megace (megestrol acetate, USP) Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọgwụ Ọjọọ na-enye nkọwa zuru ezu banyere ọgwụ ndị dịnụ dị na mmetụta ndị nwere ike ịnweta mgbe ị na-ewere ọgwụ a.
9. Megestrol Acetate Jiri Ebube Kwesịrị Iji Eleda Anya
Megestrol acetate (595-33-5) bụ onye na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ndị ọzọ na-enwe mmetụta siri ike na agụụ. A na-eji ya eme ihe dị ka onye na-eme ihe na-egbochi ya; Otú ọ dị, mmetụta utịp nkịtị nke uru uru na-eduga na ya ugbu a dị ka onye na-arụ ọrụ orexigenic. Nchịkwa nke MA na-ebute ọganihu dị ukwuu na agụụ na ahụike ndị na-ebute nje HIV na ndị nwere ọrịa cancer. MA ugbu a bụ Nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ (FDA) kwadoro maka Ọrịa dị arọ nke nje HIV. Tụkwasị na nke ahụ, ma na ahụ ike, ndị agadi okenye na ndị agadi nọ na-elekọta ụlọ ọrụ ogologo oge, iji MA emepụtawanye ọganihu dị arọ nke anụ ahụ. Ojiji nke ndị ọrụ orexigenic dịka MA na ntọala ndị a kwesịrị ekwesị n'ihi na enwere ihe nfe ọnụ na-arịwanye elu. N'ezie, MA nwere utịp dị ukwuu n'ahụ ibu na agụụ anụ ahụ karịa ndị ọzọ na-ahụ maka ihe ndị dị ka dronabinol na eicospentaenoic acid. Otú ọ dị, na ndị agadi na ndị ọrịa na-arịa ọrịa cancer ma ọ bụ nkwarụ azụ, abụba bụ isi maọbụ naanị ihe ndị na-eme ka uru dị arọ, na-enweghị obere nkwonkwo akwara ma ọ bụ akụkụ ndị ọzọ nke enweghị oke abụba. N'etiti ọtụtụ mmetụta dị iche iche nke iji MA, mmebi nke testosterone na estrogen mmepụta bụ ihe a ma ama. Tupu a na-ejikarị ọgwụgwọ na-emetụta ndị ọzọ na-eme ka a na-agwọ ọrịa na-emepụta (flutamide, bicalutamide) n'ime ndị nwere cancer prostate, MA na-ejikarị eme ihe na ọnọdụ a. N'ezie, na ndị agadi, jiri MA na-ebute na ọkwa ndị dị nso na testosterone. MA ka ejirila mee ihe iji gbochie etiti estrogen na ụmụ nwanyị nwere ọrịa kansa.
Ọmụmụ ihe a bipụtara n'ọnwa a na JCEM nyochare mmetụta dịgasị iche iche nke testosterone na MA na ngụkọta nke uru bara uru na ndị ọrịa bu nje HIV. Nnyocha a na-egosi, ọzọ, MA nwere mmetụta dị ukwuu na agụụ na ahụ dị arọ, na abụba na-enweta ihe kachasị mkpa nke mmụba nke ibu ahụ. Otú ọ dị, a na-ejikwa ọnụ ọgụgụ anụ ahụ na-abaghị uru na-etinye aka na ọnwụnwa a, dịka nchọpụta mbụ banyere mmetụta nke MA na-enweta uru dị ukwuu n'ime ndị ọrịa nwere nsogbu nje HIV. Mulligan et al kwuru na a kwụsịrị testosterone, na mgbatị nke testosterone enweghị mmetụta na ngwakọ nke uru bara ụba; Ọzọkwa, nchịkwa MA na-eme ka ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu. A ghaghị iji nlezianya tụlee mmetụta nkwụsị nke MA na mmepụta testosterone na igbochi mmetụta nke testosterone na ịba ụbụrụ na-ahụ anya tupu iji MA na ndị ọrịa a. Ọnwụ nke ndị na-arịa ọrịa AIDS na-enwe njikọ chiri anya na ọkwa dị ala androgen.
Ajuju ajuju ajuju banyere nsogbu nke MA. A ghaghị iji nlezianya tụlee ya ma jiri nlezianya jikwaa ya. Ọ bụrụ na mmụba nke agụụ na uru na oke abụba bụ ihe mgbaru ọsọ na-achọsi ike na nchịkwa nke cachexia ma ọ bụ na-abaghị uru, MA na-abụ otu n'ime ndị na-arụ ọrụ nke kachasị ike ugbu a. A ghaghị iji ya mee ihe megide ikike nke mmechi na mmebi nke mmepụta nke androgen. N'ihi njirimara antiandrogen, mmetụta nke antianabolic nke MA adịghị emeziwanye site na nchịkwa testosterone.
10. Kedu ihe kachasị mkpa m kwesịrị ịma banyere Megestrol Acetateuzuzu?
Megestrol acetate ntụ ntụ nwere ike imerụ nwatakịrị a na-amụbeghị amụ ma ọ bụ kpatara nsogbu nwa. Ejila mygestrol mee ihe ma ọ bụrụ na ị dị ime.
Tupu ị na-ebu mredrol acetate ntụ ntụ, gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị nwere ọrịa shuga ma ọ bụ akụkọ ihe mere eme nke ọrịa strok ma ọ bụ eriri ọbara.
Ọdịdị ụbụrụ gị nwere ike ịgbanwe ma ọ bụrụ na ịwa ahụ, na-arịa ọrịa, na-enwe nchekasị, ma ọ bụ nwee ọrịa. Adịghị agbanwe ọgwụgwọ ọgwụ gị maọbụ oge ị na-enweghị ndụmọdụ dọkịta gị.
Megace ES nwere elu dị elu nke megestrol acetate ntụ ntụ karịa Megace. Jụọ onye na-ere ọgwụ gị ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ọgwụ ị na-enweta na ụlọ ọgwụ.
11. Ebee ka m nwere ike ịnweta ozi ndị ọzọ banyere Megestrol Acetate?
Cheta CAS: 595-33-5
♣ Aha aha: Megace®, Megace® ES
Tags: zụta Megestrol acetate ntụ ntụ, Megestrol acetate ntụ ntụ
Kedu otutu 4-DHEA na-agbanwe na Testosterone? J147 Drug Ahụmahụ (1146963-51-0) Alzheimer's Age